12 Park Ranger vakaurayiwa mukurwisa kwakaipisisa paUNESCO World Heritage Site
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » 12 Park Ranger vakaurayiwa mukurwisa kwakaipisisa paUNESCO World Heritage Site
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Kufamba Nhau • DR Congo Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Virunga National Park iri UNESCO World Heritage Saiti muEastern Democratic Republic yeCongo. Inozivikanwa seAfricas yekare uye yakawanda biologically nzvimbo yakachengetedzwa.
Nhasi paki yaive nzvimbo yekutyisa. Kwaive kumwe kurwisa kwakaipisisa mupaki, dunhu rekare reAfrica uye rakanyanya kuchengetedzwa.
Paki yakavharwa munaKurume zvichienderana nemirairidzo yeWHO Vakuru vakatarisira kutangazve kushanda kwevashanyi musi wa1 Chikumi asi nechinoitika chazvino, hazvigoneke. Ikoko yaive s yakafanana kurwisa s makore akati wandei yapfuura iyo ranger yakaurayiwa ichiperekedza mushanyi weBritish.
Kunze kwevachengeti vemapaki gumi nemaviri, mutyairi nevamwe vanhu vana vakaurayiwa pakurwiswa kwakaitwa kuGoma, uko kusina munhu kana boka rakazviti nderake, gavhuna wedunhu reNord Kivu akadaro muchirevo.
Chiziviso chinotevera chaburitswa nePark Authorities pakutanga kwanhasi.
Zviri nekusuwa kukuru kuti Virunga National Park inosimbisa, kuti neChishanu kwakave nekurwiswa kwakakura nemapoka ane zvombo pedyo neRumangabo Village izvo zvakakonzera kurasikirwa kukuru kwehupenyu.
Izvi zvinosanganisira vanhuwo zvavo, vashandi veVirunga, uye Virunga Park Ranger. Panguva ino, ruzivo rwese rwuripo runoratidza kuti uku kwaive kurwisa kwevanhu vemo. Virunga Park Ranger yanga isiri iyo yakanangwa nekurohwa asi vakarasikirwa nehupenyu hwavo vachipindura kurwiswa mukudzivirira vagari vemo. Iri izuva rinoparadza kuVirunga National Park nenharaunda dzakatenderedza.
Pfungwa dzedu dziri kumhuri neshamwari dzevose vakaurayiwa pamwe nevakuvara, vamwe vacho vari kurwira kurarama kwavo.
Virunga National Park inzvimbo yenyika muAlbertine Rift Valley mudunhu rekumabvazuva kweDemocratic Republic of the Congo. Yakagadzirwa muna 1925 uye iri pakati penzvimbo dzekutanga dzakachengetedzwa mu Africa. Mukukwirira, iri pakati pe680 m muSemliki River valley kusvika 5,109 m muRwenzori Mountains.
Iyo saiti-yakanyorwa saiti yakapararira pamusoro pe7,800 masikweya kilometres (3,000 maira mamaira) pamusoro pemiganhu yeDR Congo, Rwanda, neUganda.
Imba kune yakakurumbira pasirese vagari vemakomo emakorira asi yakarohwa nekukwira kusagadzikana uye mhirizhonga.
Yakavhurwa muna 1925, paki yakaona kurwiswa kwakadzokororwa nemapoka evapanduki, mauto, uye vanovhima zvisiri pamutemo.
Iwo akazara e176 evarindi varo vakaurayiwa mugore rekupedzisira makumi maviris Mune kumwe kurwiswa, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwenzvimbo yeIturi nemusi weChina, vanhuwo zvavo vanomwe vakaurayiwa nemauto.
Masosi anoti mhosva iyi yakanangana nenhengo dzeCODECO - zita rayo riri pamutemo rekuti Cooperative for the Development of Congo - sangano rezvematongerwo enyika nechitendero muIturi rakatorwa kuboka reLendu.
Cuthbert Ncube, sachigaro we African Tourism Bhodhi akashora kurwisa uku uye akarondedzera runyararo rwesangano kumhuri dzevakauraiwa.